इटहरीमा कस्तो चल्दैछ रात्रिकालीन बजार ? (भिडियोसहित) | Sagarmatha TVSagarmatha TV इटहरीमा कस्तो चल्दैछ रात्रिकालीन बजार ? (भिडियोसहित) | Sagarmatha TV
प्रदेश एकको राजधानी दावी गर्ने इटहरी समसाँझै बन्द हुन्छ । मानिसको व्यस्तता बढ्दै जाँदा बजार भने समसाझै बन्द हुदा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरेको छ । सर्वसाधारणले असुविधा भएको गूनासो गरिरहदा इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने पूर्वमै नुमना रात्रीकालीन बजार सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।
त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेत रात्रीकालिन बजार सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । इटहरीका किराना, औषधी पसल लगायतका अत्यावश्यक पसलहरु रात्री ८ बजे नै बन्द हुदा सर्वसाधारणले सुविधा पाउन सकेका छैनन ।
यहि अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै उपमहानगरपालिकाले परिक्षणको रुपमा रात्रीकालिन बजार सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले इटहरीको उत्तर पश्चिममा आइतबारे देखी टेलिकमसम्मको बाटोमा सोलार लाईट, सिसिटिभी क्यामेर जडान गर्ने देखि लिएर शौचालय र प्रहरी बिट राख्ने गरीको तयारी थालेको छ ।
बजार सञ्चालन गर्ने विषयमा उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, टोलबासी सबैको सर्वपक्षीय छलफल गरी सम्भावीत स्थलको अनुगमन पनि गरिएको छ । सो बजारमा अत्यावश्यक सामानहरुका साथै अन्य विभिन्न प्रकारका पसलहरु सञ्चालन गरिने योजना रहेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेष विष्टले बताउनुभयो ।
बजार सञ्चालन गरिने भएपछि स्थानिय टोलबासीहरु उत्साहित भएका छन् । असुरक्षा हुने त्रासले व्यवसायीहरु रात्रिकालिन बजार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो मान्ने गरेका छन । तर त्यसका लागि बजारस्थलमा प्रहरी बिट राख्ने गरीको तयारी भएको बजार सञ्चालन समितकी संयोजक समेत रहनुभएकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउछिन ।
रात्रिकालिन बजार सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा स्थलगत अनुगमन गरिसकिएकाले अब चाँडै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने उपमहनगरपालिकाले तयारी गरेको छ ।